England: Arday Soomaali ah oo £185,000 ka dhacay reer UK | KEYDMEDIA ONLINE
England: Arday Soomaali ah oo £185,000 ka dhacay reer UK
Cabdisalaam Daahir, oo 20 jir ah, ayaa lagu xukumay ku dhwaad labo sano oo xabsi ah, kadib markii uu aqoontiisa cilmiga kumbuyuutark u adeegsaday burcadnimo iyo dhaca xoolaha dadweynaha.
LONDON, UK - Cabdisalaam Daahir, oo ah arday Soomaaliyeed oo 20 jir ah, kuna takhasusay cilmiga kumbuyuutarka, kuna dhaqan Enfield, Waqooyiga London, ayaa xabsiga la dhigay, kadib markii uu dhacay lacag dhan £185,000 oo bound.
20 jirkaan, ayaa dadweynaha u dirayay fariimo, isagoo iska dhigaya inuu ka tirsan yahay, Royal Mail, bangiyada waaweyn iyo shirkadaha bixiya adeegyada taleefannada gacanta.
Wuxuu dadka u diri jiray fariimo khiyaano maleegan ah, sida in lagu leeyahay canshuur celin, dhaqdhaqaaqyo aan caadi ahayn oo ku saabsan bank statements-koda iyo qodobo kale oo cabsi galin ah.
Daahir ayaa qirtay dambiga ah in uu sameeyay khiyaano isaga oo wata magacyo been ah, intii lagu guda jiray gar-maqalka dacwaddiisa, maxkamadda Crown Court ee London.
Cabdisalaam Daahir, ayaa howshaan ku guda jiray Intii u dhexeysay 1-dii Diseembar 2019 illaa 20-kii May 2021, wuxuuna diray farriimo fara-badan oo khiyaano ah, isagoo iska dhiga inuu ka socdo ururo badan oo lagu kalsoon yahay.
Ardaygan reer London, ee asalkiisu Soomaaliga yahay ayaa lagu xukumay 20 -kii bishaan Ogoosto 2021 illaa 22 bilood oo xabsi ah kadib markii lagu helay danbiya lagu eedeeyay.